नेपालले ओमानमा टि–२० क्रिकेट सिरिज खेल्ने, कोको छन् प्रतिस्पर्धी टिम? - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालले ओमानमा टि–२० क्रिकेट सिरिज खेल्ने, कोको छन् प्रतिस्पर्धी टिम?
काठमाडौं, साउन २१ । नेपालले ओमान क्रिकेट संघको आयोजनामा हुने टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज खेल्ने लगभग पक्का जस्तै भएको छ ।
ओमानले टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटलाई मध्यनजर गर्दै पाँच देशको सहभागितामा यहि अक्टोबरमा टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज आयोजना गर्दैछ । यो सिरिजमा नेपालले पनि भाग लिन लागेको नेपाली क्रिकेट टिमका म्यानेजर रमन शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुग्ने टिमलाई समेटेर सिरिज आयोजना गर्ने ओमानको योजना थियो । तर, नेपाल भने विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुग्न असफल बन्यो । तर, नेपाललाई पनि सहभागिता गराउन प्रयास गरिरहेको म्यानेजर शिवाकोटीले बताए । उनले भने, ‘अहिले नै टुंगो भने लागिसकेको छैन । तर यहि साताभित्र खेल्ने-नखेल्ने भन्ने टुंगो लाग्छ । हामी पहल गरिहेका छौं । खेल्ने सम्भावना धेरै छ ।’
सिरिजमा आयोजक ओमानसँगै आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र हङकङ छन् । त्यस्तै, नेपालले पनि खेल्ने टुंगो लागेमा पाँच राष्ट्र हुनेछन् । तर नेपालले खेल्ने नखेल्ने विषयको टुंगो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्(आईसीसी) ले लगाउने छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बन परेपछि आईसीसीले नेपाली क्रिकेट हेर्दै आएको छ । अनलाइन खबरबाट साभार
याे पनि पढ्नुस इस्टर्न रिजन कपः १८ खेलाडीको नाम सार्वजनिक, को–कोले पाए प्रारम्भिक टोलीमा मौका?
ट्याग्स: टि-२० क्रिकेट सिरिज, नेपाली क्रिकेट टिम